034 39 757 56 - 034 11 846 02 - 033 37 592 69 - 032 41 219 17
Volambita soatoavina mampiray
Tenin’ny filohan’ny fikambanana Iray, Andriamatoa Eris Rabedaoro
Hiara-hankalaza ny Volambita isika afaka iray volana. Kely sisa !
Io no fotoana andrandrain’ny rehetra ary antenaitsika hanova ny ho avin’ity Madagasikara malalatsika ity. Efa nanaiky avokoa ny Ampanjakan’ny foko valo ambin’ny folo, fa hiara-hankalaza ity Lohataona ity isika malagasy rehetra amin’ny 22 septambra ho avy izao.
Nahoana no nantsoina hoe VOLAMBITA ary nahoana no ankalazaina amin’ny volana septambra ?
Rehefa tonga ny volana septambra aty amin’ny ilabolan-tany atsimo, dia mifoha daholo indray ny zava-manan’aina. Velona avokoa noho izany na ny vorona, na ny voninkazo, na ny hazo, na ny biby
Hoy ny volan’ny kakafotra hoe: Tao Tao Kafa, izay midika hoe Taona Vaovao.
Ny ambiaty kosa dia mamelana amin’io fotoana io. Hoy ny Ntaolo hoe: manambara izany fa tonga ny taona vaovao voalazan’ny Lanitra. Namorona io zavamaniry io hono mantsy Andriamanitra entina hanambarana ny Lohataona. Ny ambiaty mantsy mahalala ny ao ampon’ny Lanitra.
Samy nanome anarana io Lohataona io avokoa ny foko rehetra, ka nisy anarana iray niavaka tamin’ny be sy ny maro, dia ny Volambita. Mitovy amin’ilay antsoina hoe Asaramanitra any ampovoan-tany sy any antsimon’ny nosy izy io.
Mety avy amin’ny sanscrit no nihavian’ny teny hoe Volambita saingy tsy fantatra mazava izay tena dikany, ka izay ihany koa no antony nisafidianana azy.
Amin’io fotoana io isika mianakavy vao hiara-hankalaza andro lehibe iombonana hatramin’ny nahazoantsika ny fahaleovantena na dia samy manana ny fankalazana ny taom-baovaony aza ny faritra sy foko tsirairay avy. Amin’ny alalan’ny harentsaina sy ny zava-kanto no iarahantsika manatontosa izany firaisan-kina izany.
Raha mifandray tanana isika, dia hiara-hiaro ny firaisan-kina sy ny fihavanana ary hiaro ny fahasamihafana.
Fa ny fihavanana no hery.
Antananarivo faha 18 aogositra 2017
Ramatoa Mariette Andrianjaka, reny mpiantoka ny "Hay Fy Mampiray" amin'ny 22 septambra ho avy izao
Jaojoby avy nandray feo ny fandraisany anjara amin'ny hira fanevan'ny VOLAMBITA